सुविधा थप्दै विमानस्थल, नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडानको तयारी « News of Nepal
सुविधा थप्दै विमानस्थल, नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडानको तयारी
नेपाल समाचारपत्र, बाँके ।
नेपालगञ्ज–दिल्ली हवाई उडानको तयारीसँगै नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल, पार्किङ, वेटिङ रुम, व्यवस्थित क्यान्टिनको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । इन्टरनेशनल र डोमेस्टिक टर्मिनल, ठूला जहाजका लागि पश्चिममा तीन सय र पूर्वतिर दुई सय मिटर रनवे बनाउने तयारी भएको नागरिक उड्डयन कार्यालय, नेपालगञ्जका निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि ड्रोइङ, डिजाइन र कष्ट बनाउने काम भइरहेको छ । दुई महिनामा यो काम सकिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्देशक ठाकुरले बताए । ‘अहिले एक करोड छुट्याइएको छ । यत्तिले त नर्मिनल बन्दैन, निर्देशक ठाकुरले भने ।
नेपालगञ्ज विमानस्थल परिसरमा नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा भवन छन् । त्यसलाई हटाउनै पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्मीले सञ्चालन गर्दै आएको क्यान्टिन असोज १ गतेदेखि खाली गराइएको छ । त्यहाँ वेटिङ रुम र व्यवस्थित क्यान्टिन बनाउने ठाकुरले जानकारी दिए ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलको रनवे सानो छ । ठूला जहाजलाई ठाउँ पुग्दैन । एक सय ५० सिटे जहाजलाई मध्यनजर गरेर कार्यालयले पाँच सय मिटर रनवे बनाउन थालेको छ । विमानस्थलमा पार्किङको पनि उस्तै समस्या रहेको छ । अहिले दुई वटामात्रै पार्किङ छ । यत्तिले नपुगेपछि पाँच वटा थप पार्किङस्थल बनाउन थालिएको छ ।
बुद्ध एयरले पुस÷माघदेखि नै दिल्ली उडान शुरु गर्ने बताएपनि विमानस्थललाई ‘सुविधायुक्त’ बनाउन समय लाग्ने देखिएको छ । निर्देशक ठाकुरले अर्को दशैसम्ममा दिल्ली उडान हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार, दिल्ली एयरपोर्टले नेपालगञ्जबाट जाने जहाजका लागि स्लट (समय) दिइसकेको छैन । दिउँसोको चापले गर्दा राती उडान भर्नु पर्ने भनिएको पनि ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलको एक सय ३८ विगाह जमिन छ । एक सय ५० मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाईको रनवे रहेको छ । ‘हामीसँग जग्गा पर्याप्त छ । २० वर्षको लागि सोचेर योजनाहरु बनाउन आवश्यक छ, निर्देशन ठाकुरले भने ।
नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि भारतीय राजदुताबासले पनि चासो दिएको छ । भारतबाट वर्षेनी ठूलो संख्यामा मानसरोबर जान आउने पर्यटकले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान नहुँदा दुःख व्यहोर्नु परेको छ । तीन दिनअघि नेपालगञ्जमा आएका भारतीय राजदुत मन्जिव पुरीले यो विषयमा यहाँका अधिकारीहरुसँग लामै छलफल गरेका थिए । राजदुत पुरीले भारतीय पर्यटकले मानसरोबर तीर्थ जादा किन सास्ती पाइरहेका छन् भनेर यहाँका नागरिक उड्डयन कार्यालयका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेका थिए । नागरिक उड्डयन कार्यालय, नेपालगञ्जका निर्देशक ठाकुरले मौसमका कारणले मात्रै पर्यटकले सास्ती व्यहोर्नु परेको रिपोटिङ गरेका थिए ।
मानसरोबर जाने भारतीय पर्यटकको चाप बढ्दो छ । नेपालगञ्जबाट एक दिन हुम्लाका लागि २८ वटासम्म उडान भएका थिए । दिल्लीबाट काठमाडौं र त्यहाँबाट नेपालगञ्ज हुँदै हुम्ला जाने भारतीय पर्यटकलाई नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडान हुने बित्तिकै समय र पैसाको बचत हुन्छ । यहाँको पर्यटकीय विकासमा पनि त्यसले ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।
नेपालगञ्जदेखि मंगलबार २२ वटा उडान थिए । यहाँबाट काठमाडौं दैनिक ७÷८ वटा उडान हुन्छन् । दिल्ली उडान थाल्दा विमानस्थलको स्तरोन्नति र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन जरुरी रहेको छ । दिल्ली उडान हुनुअघि भारतबाट सुरक्षा टीम आएर हेरेर मात्रै अनुमति दिने निर्देशक ठाकुर बताउँछन् ।
यस्तो हुँदैछ काम
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अब भिआइपीलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँबाट रनवेसम्म पु¥याउने र ल्याउने तयारी भएको छ ।
जाने र आउने बाटो फरक फरक बनाइदैछ । कतिपय भिआइपीका समर्थक, कार्यकर्ताहरु धेरै आउने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो । ‘आउने र जाने भिआइपीलाई एकै ठाउँमा राख्दा अव्यवस्थित भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, हामीले छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्दैछौ, नागरिक उड्डयन कार्यालय, नेपालगञ्जका निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले भने, आउने र जाने भिआइपीलाई छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्दैछौ ।’
अहिलेसम्म व्यापारीहरु आफ्नो सामान बोकेर रनवेसम्म पुगिरहेका थिए । त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरिएको छ । ‘पोकापुन्तरो, झोला बोकेर व्यापारीहरु जहाजसम्मै पुग्ने गरेका थिए, त्यसलाई मैले हटाएको छु, आफ्नो कार्यकक्षमा झुड्याएको ज्याकेट देखाउदै निर्देशक ठाकुरले भने, यो लगाएर मात्रै रनवेसम्म जान पाउने व्यवस्था मिलाएको छु । यसो गर्दा व्यापारीहरु पोका बोकेर त्यहाँसम्म जान सक्दैनन् ।’
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदैछ । निर्देशक ठाकुरले कुनै अप्रिय घटना भइहाले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालगञ्जबाट एम्बुलेन्स बोलाउदा बोलाउदै धेरै समय खेर जान्छ, ठाकुरले भने, आफ्नै भयो भने त बिरामीलाई तत्कालै अस्पताल पु¥याउन सकिन्छ ।’
परिस्थितिले सधै साथ नदिन सक्छ । रनवेमा विमान केही भइहालेमा त्यसलाई तान्न एउटा ट्याक्टर छैन । त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिदैछ । अझ सानो कुराको अभाव विमानस्थलमा रहेको छ । रातीमा रनवे आसपासमा बत्ती छैन । राती केही गर्नुपर्ने भएमा बत्तीको सुविधा नपाएकाले यसको पनि लेखापढी भएको ठाकुरले बताए ।
विमानस्थल परिसरमा सुर्ती, चरोट, गुट्खा निषेध गर्ने तयारी भएको छ । यी चिज खाएर जथाभावी फोहोर गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थालेको निर्देशक ठाकुरले बताए ।
नेपालगञ्ज विमानस्थल नेपालगञ्जको २० नम्बर वडामा पर्छ । यो नेपालगञ्ज बजारदेखि चार किलोमिटर टाढा रहेको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति भएर घरेलुसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्थापन राम्रो हुँदा वडावासीलाई धेरै नै फाइदा हुने वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताए । ‘यो त हाम्रो वडाको सान हो, विमानस्थलको व्यवस्थापनले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ, वडाध्यक्ष कार्कीले भने, वडाको आम्दानीमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ ।’
इलाम बजारबाट तराई जोड्न फास्ट ट्रयाकले गती लिँदै
युनिलिभर धर्नामा ४१ मजदुर पक्राउ
गुठी विधेयकविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम आह्वानः
फारम भर्न सके लोकसेवा पास गरे
स्रोतको पहिचान गरी बजेट बनाईएकाले घाटा
मूल सडक चौडा गर्ने निर्णय भएकै दिन आफ्नै घर भत्काउँछु
अवसर दिए महिलाले पनि काम गर्न..
‘एक प्रहरीले पाँच सय नागरिकहरुलाई सुरक्षा..
कांग्रेसले एजेण्डा नपाएको होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षीको..
‘असन्तुष्ट बने मात्र नयाँ कुराको खोज..
गुठी विधेयकविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम आह्वानः..
फारम भर्न सके लोकसेवा पास गरे..
स्रोतको पहिचान गरी बजेट बनाईएकाले घाटा..
गुठी नमासौं भन्दा पानी छ्यापी-छ्यापी पिटे आन्टी !
५ दशकदेखी रोल नम्बर १३ नलेखिएको विद्यालय !
दिउँसै बन्द भए हेटौंडाका पसल
अस्पतालको ‘चरम लापरबाही’ः महिलाको मृत्यु
शिक्षकको कुटाईबाट छ जना विद्यार्थी घाइते
गुठी विधेयक सम्बन्धमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने
गुठी विधेयकविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम आह्वानः फोटो फिचर